SEO ဆိုသည်မှာရလဒ်များရခြင်းသည်စစ်ပွဲ၏တစ်ဝက်သာဖြစ်သည် Martech Zone
SEO ဆိုသည်မှာ - ရလဒ်မှာဖြစ်ခြင်းသည်စစ်ပွဲ၏တစ်ဝက်သာဖြစ်သည်
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 21, 2009 စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ Douglas Karr
တခါတရံတွင်ရှေးရှေးလူတို့သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာများသို့ဝင်ရောက်ရန်မှန်ကန်သောအရာများကိုပြုလုပ်သော်လည်းရှာဖွေမှုရလဒ်များကိုမတွေ့ရသေးပါ။ သင်သည်သင်၏ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့် Google Analytics တွင်တိုးတက်မှုများကိုကြည့်ရှုနေပြီးသင်အသွားအလာများစွာကိုမတွေ့ပါကပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာတူးရန်လိုကောင်းလိုပေမည်။
new ည့်သည်အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ရှာဖွေခြင်းသည် search engine ၏ရလဒ်စာမျက်နှာမှစတင်သည်။ သငျသညျအသွားအလာမောင်းနှင်လိမ့်မည်ဟုသော့ချက်စာလုံးများများအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိပါသလား အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရောက်နေလျှင်၊ သင်၏ရလဒ်သို့မဟုတ်သင်၏ဘလော့ဂ်သို့ထိုရလဒ်များကိုဖြတ်သန်းသွားသောလူများဖြစ်သည်?
ဤအချက်အလက်ကိုသင်၏အချက်အလက်ထဲတွင်ရှာမတွေ့ပါ analytics အထုပ်, ဒါပေမယ့်သင်ကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် Google Search ကို Console (Bing Webmasters များ ဒီမှာမရှိသေးဘူး။ ဂူဂဲလ်ရှာဖွေရေး Console မှသင်စာရင်းသွင်းထားသောရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့်သင်၏အနေအထားကိုဖော်ပြပေးသည်။ ထို့နောက်လူများမှတဆင့်ရှာဖွေနေသည့်အမှန်တကယ်ရလဒ်များ။
အကယ်၍ သင်သည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များစွာတွေ့ရှိရသော်လည်း နှိပ်၍ မရပါကပိုမိုကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များ (သို့မဟုတ် blog post ခေါင်းစဉ်များ) နှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးသော့ချက်ကျသောသော့ချက်ကျသောဝါကျအချို့ကိုရေးသားခြင်းအားဖြင့်သင်ပြုပြင်သင့်သည်။ ဤတွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များဖြစ်သည် သင်၏ Blog ကို geotag:
Problogger ၏ရလဒ်သည် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းသတိပြုပါ။ လူတိုင်းကသူ့ရလဒ်ကိုဖြတ်ပြီးနှိပ်ရမယ်။ ဒါကြောင့်ငါ့မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ရှိတယ်။ meta meta ဖော်ပြချက်အသစ်တခုကိုငါကြိုးစားမယ်။
သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် RSS feed ကို geotag လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောကိရိယာတစ်ခု။ သင်၏လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ဆိုဒ်၊ ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ် RSS ထည့်သွင်းမှုတွင်ကုဒ်နံပါတ်ကိုထုတ်လုပ်ပါမည်။
ဤအသေးအဖွဲပြင်ဆင်မှုသည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေသူများပိုမိုလာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် သင်၏ Blog ကို geotag ယှဉ်ပြိုင်မှုထက်!
သင်၏လိပ်စာကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်သို့မဟုတ်လိပ်စာတစ်ခုအတွက်ဇစ်ကိုရှာဖွေရန်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် verbiage အချို့ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ရလဒ်များကိုရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်စာမျက်နှာကိုပြုပြင်ပြီးပြီဆိုပါက re-index လုပ်ရန်ဆိုက်ကို Google သို့ပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့သည်။
ငါ, ငါ့ကို, ငါနှင့်လူမှုမီဒီယာ
ဇွန် 21, 2009 မှာ 5: 55 pm တွင်
ဇွန် 21, 2009 မှာ 11: 20 pm တွင်
ဇွန် 21, 2009 မှာ 11: 27 pm တွင်
ငါသိသောသို့မဟုတ်ခြေရာခံရာမည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အတွက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါ
အဓိကသော့ချက်စာလုံးနှင့်မည်သူမျှသူတို့ link ကိုမနှိပ်
ဇွန် 21, 2009 မှာ 11: 32 pm တွင်
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် - မင်းမှာအကြောင်းအရာကောင်းတဲ့စာရေးဆရာတွေအများကြီးရှိရမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအတော်များများရှိပြီး CTR များတိုးချဲ့ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ CTRs သည် SERPs တွင်အလွန်နိမ့်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါက၎င်း၏ဘုံမပြောလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့်ငါကအများကြီးဥပမာမြင်ကြပြီ။ အဲဒီအကြောင်း post ရန်လုံလောက်သော :) ။
ဇွန် 21, 2009 မှာ 11: 50 pm တွင်
အွန်လိုင်းအောင်မြင်သည် ABC ရုပ်ပုံတွေကိုလူတော်တော်များများကသိကြတာများတယ်